Potato ingenye ozithandayo imifino abantu. Kusukela yathela inqwaba izitsha ezihlukahlukene. sivamile ungacabangi mayelana lokuthi, ngaphandle palatability komkhiqizo has ayelapha. Futhi-ke, kukhona umqondo kancane indlela ewusizo amazambane ijusi esiswini. A isihawu. Phela, uyakwazi ukusiza ukuvimbela izifo ezihlukahlukene futhi kujwayeleke impilo.
Kukholakala ukuthi umkhiqizo elicwile isitashi kuphela. Kodwa akunjalo: amazambane kuyinto okune-fibre, okuyinto ngokushesha ugxile, amavithamini, amaphrotheni, acid organic, amaminerali kanye namavithamini. I nezilimo eziyizigaxa has wokuqukethwe lelisetulu potassium, ngcono exchange amanzi-usawoti kanye nokuvinjelwa ukukhonza yesifo senhliziyo. izinto Iningi eyigugu, ngeshwa abhidlizwa ngesikhathi ukupheka ukudla inqubo ukuthosa nokupheka. A amazambane eluhlaza ukudla kungamukelwa, ngoba akanawo ukunambitheka engcono. Futhi ngesikhathi esifanayo ungakwazi ukuthola kungaba ukuqunjelwa.
Nokho, kusenomsebenzi omkhulu ithuba ukuphuma umkhiqizo izinto eziningi eziwusizo. Kuyadingeka ukuba ulungiselele ijusi. isiphuzo ongahluziwe uzobuyisa zonke izingxenye okuphulukisa tuber. Faka amazambane juice ukwelapha isisu, kanye nezifo eziningi zangaphakathi nezangaphandle. Kufanele kuqashelwe ukuthi isiphuzo okuholela - indlela enhle ekuvimbeleni izifo eziningi.
Namuhla, yemifino is kwanda emazweni amaningi. It has nezilimo eziyizigaxa fructose, sucrose, i-magnesium, i-potassium, i-phosphorus, nensimbi kanye nezinye izakhi. Ukucwaninga kososayensi abonisa ukuthi ngempumelelo kakhulu amazambane ijusi esiswini. Isiphuzo ingasetshenziswa isilonda esiswini kanye isilonda duodenal.
Kuyasiza ukusebenzisa ijusi umuthi. It uyakwazi kakhulu ukunciphisa esiswini asidi juice kwehlisa ubuhlungu embundwini isilonda.
Ngu ucwaningo, ezihlukahlukene izinga eyingqayizivele yalesi siphuzo ziye zatholakala. Kuyinto tonic, ukuphulukisa, isisu, ejenti eqeda ukuvuvukala. Potato juice ine imvelo ane-alikhali futhi kahle aqede ukuhlaselwa isilungulela. amandla aKhe ukuphulukisa ongapholisa ebusweni nge ukuguguleka kwenhlabathi.
Indlela ukuthatha juice?
Uma ususithathile imithi oyinikiwe, kubalulekile ukuba balandele imithetho eyisisekelo. Kufanele kuqondwe ukuthi isiphuzo okuholela - impela umuthi onamandla. Ngakho-ke, kumelwe siqaphele kakhulu kunalokho ukusetshenziswa akazange balimaza amazambane ijusi esiswini. Ungenza kanjani ukuthi lena panacea?
Labo uya ukuba aphathwe isiphuzo Kumelwe ukhumbule ukuthi kubalulekile ukuba baphuze fresh amaminithi angu-10 ngemva kokuvuna. Amazambane ifomu ukuhlanzwa mnyama. Ngakho-ke, asikwazi ligcinwe isikhathi eside ngaphandle. Phela, kukhona ekubhujisweni kancane kancane amavithamini namaminerali.
Enough has ethize ukunambitheka amazambane ijusi esiswini. isiphuzo ukulungiselela kakade uyakwazi abanye abantu kubangele imizwa engakhi kakhulu. Ukudla zingenziwa kujabulise kakhudlwana uma abeke kanye nezinye izithako. Ukuthuthukisa ukunambitheka ikhuthaza ukwengeza isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi juice, noma isanqante ngezabelo alinganayo.
Ukuze uvimbele noma aphathe isiphuzo wokugaya ukudla washisa ekuseni ku elingenalutho ihora esiswini esisodwa ngaphambi kokudla kwasekuseni. Ukwelapha kwaba izinsuku ezingu-10. Phumula iwukuba esilinganayo isikhathi. Bese uphinda course.
Uma uthatha amazambane juice esiswini ngezinjongo zokwelapha, kubalulekile ukuba ahlale edla ukudla imifino. Akunakwenzeka ukusebenzisa imikhiqizo inyama kanye nenhlanzi. Kuyadingeka ukuba ngilinganisele ukudla yobisi ukuba 500-600 amagremu futhi kukhona amaqanda 2-3 kuphela ngesonto.
Enough ayibalulekile nje ukwazi ukuthi ewusizo amazambane ijusi esiswini. Indlela ukulungiselela isiphuzo kwezokwelapha? Lombuzo ezingabalulekile kangako. Kufanele kuqashelwe ukuthi yenziwe lula ngempela.
Into esemqoka, khumbula amathiphu ambalwa alula:
Kufanele usebenzise nezilimo eziyizigaxa okuqinile.
Amazambane bahlanza, ukugeza phansi ibe grater emihle. Khona-ke, i-gauze ngongqimba eziningana ngawakhamela juice.
Enye indlela - sebenzisa juicer.
Isiphuzo kumele baphuze fresh kuphela ngenxa yezimfanelo zawo ephulukisa ingashabalala.
Phuza isiphuzo kangcono, usebenzisa straw. Lokhu kusindisa koqweqwe lwawo kusuka uyayidiliza ngoba lokhu izidakamizwa, ngeshwa, kungaba kubuqede.
Ukwelashwa kuhambisana ukudla akufaki inyama, amafutha, isilinganiso sikasawoti kanye nokudla ngabhema.
Ngemva ijusi udakwe, kubalulekile ukuba omunye ingxenye yehora ukuze ukuhlala noma ukulala, bese kuphela kudlule ukudla main.
Ukusebenza kahle esiphezulu ukuphathwa kuyofezwa uma uzilungiselele kahle. Udinga ukuthobela imithetho ethile.
Kufanele ayeke ukudla inyama, inhlanzi, elungisiwe futhi izitsha sweet. Kuyadingeka ukuba esikhundleni saso kungene izithelo nemifino. Kungcono ukuba adle nabo eluhlaza. Hhayi konke lokhu kungenzeka. Sicela uqaphele ukuthi ngezinye izikhathi emzimbeni lingasinaki okubi kakhulu lesi sifo. Yingakho, ngaphambi kokuthatha ijusi, qiniseka bonana nodokotela wakho kuqala.
Ngaphambi kwelashwa enema. Lokho kwenza bezibona kangcono amaminerali ephulukisa eziqukethwe umkhiqizo amazambane.
Uma sikhuluma onjani amazambane ijusi esiswini kusebenziseka kakhulu, kufanele sinake ezihlukahlukene. I nezilimo eziyizigaxa pink and red anemibala amaminerali ngaphezulu namavithamini. Ngakho-ke, uketshezi okungcono uzilungiselele ngalezi zithelo.
Ukuze kwenziwe ngcono umphumela zokwelapha, isiphuzo kufanele kuthathwe lihambisana isanqante juice. Le nhlanganisela etuswa kolwelwesi, izilonda, nesifo, ukopha kakhulu esiswini, ukuqunjelwa kanye nezinye izifo, izitho zokugaya. Nale ukwelashwa izinsuku ezimbalwa ukudlula ukuhlaselwa isilungulela, nokubhamuka futhi ukubuyisa.
Ukuze ulwe kolwelwesi, isilungulela dyspepsia kudinga ukusetshenziswa cyclical yalesi siphuzo. Juice kufanele esiphuza ezinsukwini ezingu-10. Ngezinsuku eziningi kukhona ikhefu. baphuze ingilazi isiphuzo fresh esiswini esingenalutho ekuseni, kuthatha isigamu sehora ukufika ngaphambi kwasekuseni. ezingu-10 inkambo liphindwe kathathu.
Endabeni anda asidi esiswini inani juice kuyehla kube 3/4 inkomishi. Selani ihora ngaphambi kokudla.
Ukuqeda isilonda esiswini kanye isilonda duodenal isiphuzo ketshezi imizuzu engu-30 ngaphambi kokudla. inqubo yokwelapha ithatha izinsuku ezingu-20 nge avumelekile kancane okwandisa. Kumele siqale nge 1/4 inkomishi, engeza ikota, ukufinyelela umthamo owodwa ithebulethi 3/4 bomkhumbi.
Ukuze ukuqunjelwa nekhanda Kunconywa isiphuzo 100 g amazambane isiphuzo. Lokhu kwenziwa izikhathi 2-3 ngosuku. Juice kuthinta ingcindezi. Kuyasiza iziguli nomfutho wegazi ophezulu. Ephambi kwezinduna ukuqunjelwa kahle ukusiza ingxube ayo enziwe kusukela amazambane, beet kanye izaqathi.
Ungakhohlwa ukuthi ukuphathwa okufanele zithathwe juice asanda walungisa. Ukuchayeka kokukhanya nomoya imizuzu 10-15 kuzoholela ekulahlekeni izakhiwo ewusizo. isiphuzo Ready kufanele ngokushesha baphuze.
Potato juice akuyona nje izinto ezibalulekile futhi ingelashwa, kodwa uyakwazi ukudala umonakalo emzimbeni futhi. Kaningi kuyenzeka uma ukuhlukumeza reception isiphuzo noma okwandisa izingxenye zalo. Ngenxa yokuthi ketshezi ephulukisa kwehlisa asidi, kubalulekile ukuba acophelele uma hypoacid kolwelwesi.
Sikashukela kumele uxhumane nodokotela wakho uma unquma ukuphuza amazambane ijusi esiswini. Izimo for iziguli ezinjalo zisekelwe ingozi ephezulu igazi glucose.
It is nhlobo ukungena uketshezi lapho amazambane ngesikhumba waphenduka green. Lokhu ithoni ibonisa ukuthi lo mkhiqizo eziningi solanine (ikhemikhali enobuthi). Kungabangela ubuthi sina, okuyinto kuhambisana ukuhlanza, ukukhishwa isisu, ukulunywa futhi ukozela.
Potato juice ugcine ngokuyisimangaliso abantu kusuka ezihlukahlukene izinkinga wokugaya ukudla. Kodwa-ke iyokulethela inzuzo kuphela walabo abanamathela kuzo zonke imiyalelo ekuthandweni kwayo futhi akusho ukwandisa umthamo ebekiwe.
Kusukela ngo-February, kufanele bayenqaba ukwamukela juice amazambane. Njengoba lesi sikhathi, nezilimo eziyizigaxa ziqala buthelela ezinobuthi.
Awukwazi ukusebenzisa isiphuzo, isibambo kusuka amazambane, isikhathi eside elangeni. Ibuye ibe solanine anobuthi. Lokhu kungadala ubuthi ezinzima.
Recipe of Medicine Traditional
It Unazo izakhiwo isimanga isiphuzo. Ayikho imithi Yingakho abantu has eside amazambane juice isetshenziswa esiswini. Recipe izidakamizwa ekwelapheni unikezwa ngezansi. Kuyinto ephawulekayo ukuthi lo mshumayeli sidakamizwa sisiza ekwelapheni nezinye izifo eziningi.
Ngakho, iresiphi eyisisekelo:
Ekwelapheni izilonda esiswini, thatha juice in inani servings ubuncane 1/4 inkomishi futhi andise umthamo kuze kube 3/4 bomkhumbi izinsuku ezingu-20. Ukuhlela usuku-10 ikhefu, kufanele uqhubeke nokwelashwa.
Esikhathini ukuqunjelwa Phuza (1/4 inkomishi eyodwa ngelanga) for isigamu sehora ngaphambi kokudla. Kungcono mix it ne beetroot juice ngezabelo alinganayo.
Ukubhodla selashwe nokuphathwa 200 ml ijusi ekuseni esiswini esingenalutho izinsuku eziyi-10 Ngemva kwesikhawu samahora ukwelashwa (izinsuku ezingu-10) iyaphindwa.
Kolwelwesi ne-asidi eningi ilahlwe kanje: baphuze ijusi kathathu ngosuku, ihora elilodwa ngaphambi kokudla for isigamu inkomishi ngosuku. Isikhathi yokwelashwa - kwezinsuku 10.
Yiqiniso, ngifuna ukwazi uma wanquma ukusebenzisa amazambane ijusi esiswini, ngempendulo abantu ababhekana leli thuluzi ngokwakho. Kufanele kuqashelwe ukuthi iningi iziguli kucocela labanye tindzaba tabo eziyingqayizivele yokutakula. Isiphuzo kusiza balahle kolwelwesi, ekuqedeni kobukhulu ubuhlungu esiswini, kuvusa esesuthi.
Kuvame ngokwanele kuqashelwe ukuthi usebenzisa amazambane juice esiswini (nje nesichichimayo Izibuyekezo la maqiniso), abantu belashwa, nezinye izifo.
Kusukela ezikhathini zasendulo, lapho yiqembu lokuqala hit e-Europe, abantu abelaphi baye basungula ezihlukahlukene zokupheka eziyingqayizivele uvumele izifo ezihlukahlukene. Nokho, khumbula ukuthi ngaphambi kokusebenzisa amazambane juice (ikakhulukazi ezimweni izinhlungu zokugula okungathí sina) kufanele babonane nodokotela.